Ummeli / OEM / ODM-Zhongshan Joineonlux Co., LTD.
Ummeli / i-OEM / i-ODM
Siyaqhubeka nokusungula ngokusekwe kwiimfuno zabathengi, sisekele isikhundla esiphambili kuphando, uphuhliso, ubunjineli, kunye nentengiso yesisombululo sokukhanyisa esisekwe kwi-LED. Thembela kwizibonelelo ezipheleleyo zophando lwezibane ze-LED, uphuhliso, ubunjineli kunye nentengiso, u-Abestis uba nguvulindlela okrelekrele wokuKhanyisa kwe-LED. Okwangoku, iimveliso zethu kunye nezisombululo sele zisetyenzisiwe kumazwe amaninzi kunye nezigidi zabantu kwihlabathi liphela.
Isahluko sokuqala: Ummeli weMveliso yethu
Siyaqhubeka nokusungula ngokusekwe kwiimfuno zabathengi, simisele indawo ekhokelayo kwicandelo kumacandelo amane aphambili: iinkonzo ezisisiseko zokhuselo, iinxalenye kunye neenkqubo, inkonzo yobungcali kunye nethemina
Isahluko sesiBini: Inkonzo ye-ODM
Ngamanye amaxesha kuya kufuneka ucinge ngaphandle kwebhokisi, njengoko kungqinwa zizicelo ezininzi esizizalisekisileyo kwizisombululo ezizodwa zokukhanya. Ukukhanya kweJoineonlux Strip nguMvelisi wezixhobo zoqobo, siyakwazi kwaye sijonge phambili ukusebenzisana neyakho.
Ukusika i-Edge yeTekhnoloji ye-LED
Abathengi bethu be-OE / OES banokufikelela kwiqela elinetalente leenjineli. Isebe lethu le-R & D elikwisiza lifuna kwaye livavanye inkqubela phambili yetekhnoloji ye-LED yeprojekthi yakho.
Isahluko sesiBini: Inkonzo ye-OEM
Akukho bungakanani-bukhulu-bonke-isisombululo se-LED. Sinobuchule bokuziqhelanisa neenkqubo zethu kwaye senze ngokwezifiso naziphi na iimveliso zethu-okanye sikwenzele entsha-kwiinkcukacha zakho ngqo.
Inkqubo yokuNikezela ngeXabiso
Umxokelelwano wethu wokubonelela ngumqolo kwishishini lethu le-OEM. Ngokudibanisa imisebenzi phantsi kophahla olunye, iJoineonlux ye-LED ukukhanya kwefektri yokukhanya kubonelela ngokungafihlisiyo okungenakuthelekiswa nanto, umgangatho kunye nexabiso kubathengi bethu be-OE kunye ne-OES.
UMoya wokuKhanyisa we-Abest "gcina isithembiso kwaye uzame konke okusemandleni ethu"! Inkcubeko ye-Abest egxile kwintliziyo yabasebenzi be-Abest, kwaye ibonelela ngamandla kwi-Abest yophuhliso oluzinzileyo.